सोरियामा के गर्ने: प्रकृति, स्मारक र ग्यास्ट्रोनोमी | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | स्पेन शहरहरू, मार्गदर्शकहरू
सोरियामा के गर्ने? यो प्रश्न धेरै आगन्तुकहरु द्वारा बाट सोधेको छ क्यास्टिला वाई लियोन। किनभने त्यो शहर स्पेनको पर्यटनका लागि कम लोकप्रिय हो। र अझै यसले यसले आगन्तुकलाई प्रस्ताव गर्दछ धेरै खजाना दुवै प्राकृतिक र कलात्मक, एक जोडदार र स्वादिष्टको अतिरिक्त gastronomy.
मिरन र डेल कास्टिलोको पहाडहरूका बीचमा विशेषाधिकार प्राप्त भएको स्थितिबाट र नुहाएर डुउरो नदी, सोरिया ११ औं शताब्दीको अन्तमा शहरको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। यद्यपि चित्रहरु माउन्ट वेलोंसाडेरोमा फेला पर्दछ जुन क्षेत्र पहिले नै फलाम युगको दौडान बसोबास गरेको थियो। र यो सबै नबिर्सिन, सोरियाबाट केही किलोमिटर टाढाको वीर शहर थियो न्युन्कोशिया। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, क्यास्टिलियन शहरसँग तपाईसँग धेरै प्रस्तावहरू छन्। यदि तपाईं सोरियामा के गर्ने भनेर सोचिरहनुभएको छ भने हामी तपाईंलाई हामीसँग सामेल हुन आमन्त्रित गर्दछौं।
1 सोरियामा के हेर्ने
1.1 सैन पेड्रो को सह-क्याथेड्रल
1.2 अन्य चर्चहरू
1.4 गमाराको गणनाको दरबार
1.5 नदीहरू र साल्सेडोको दरबार
1.6 Numantino संग्रहालय
2 सोरियामा गर्नका लागि अन्य चीजहरू
3 सोरियामा के खानुहुन्छ
यसको सानो आकारको बावजुद, सोरियाको चाखलाग्दो स्मारक सम्पदा र भव्य प्राकृतिक हिमाली क्षेत्रहरू छन्। कुनै चीजको लागि होईन यो समुद्र सतहबाट १०1063 मिटर उचाईमा छ। हामी सोरियामा हाम्रो यात्रा सुरु गर्न जाँदैछौं।
सैन पेड्रो को सह-क्याथेड्रल
यो सोरियामा मुख्य धार्मिक स्मारक हो। यो १ XNUMX औं शताब्दीमा पुरानो मठको चर्चको अवशेषमा निर्माण गरिएको थियो, जसमा अझै तत्वहरू सुरक्षित छन्। बाहिरी तर्फ यो निकै शान्त छ, तर यसको भित्र धेरै चैपल र सुन्दर छन् रोमान्सक क्लोस्टर हालको मन्दिरको अघि भवनले यस वास्तुकला शैलीलाई गोथिकसँग जोडेको छ र बर्लंगा डे डुएरो कलेजिएट चर्चको छविमा निर्माण गरिएको हो।
तपाईंले सोरियामा गर्नुपर्ने एउटा चीज भनेको सहि शहरका चारैतिर छरिएका धेरै मन्दिरहरू भ्रमण गर्नुहोस् र ती प्रामाणिक छन्। वास्तु रत्नहरु। ती मध्येका बाहिर खडा सान जुआन डे रबानेराको चर्च, Romanesque शैली र बाह्रौं शताब्दीमा निर्मित। तपाइँले पनि भ्रमण गर्नुपर्दछ एस्पिनोको अवर लेडीको चर्च, यसको प्लेटरेस्क तत्वहरूको साथ, र सान्टो डोमिo्गोमा एक, जसको आवरण मा लगभग एक अद्वितीय paternitas ट्रिनिटी छ, यस संसारमा केवल यो जस्तै पाँच छन्।
यद्यपि सायद सोरिया आफ्नो सम्पत्तीको लागि बढी प्रसिद्ध छ। धेरै चाखलाग्दो कुरा यो हो Myron को महिला, एक सुन्दर बारोक मन्दिर जुन रोमान्सक शैलीमा एक पुरानोको माथि निर्मित छ।
र यो नै को बारे मा भन्न सकिन्छ सान Saturio को hermitage त्यो पहाडमा बसोबास गर्ने ठाउँ खाली सन्तुलित देखिन्छ। यो एउटा गुफामा बनाइएको थियो जहाँ पौराणिक कथा अनुसार भिजिगोथ एन्कोराइट बस्थे सान सतुरियो, आज सोरियाका संरक्षक संत, र बारोक शैलीमा छ। थप रूपमा, यो Hermitage अद्भुत मा स्थित छ महल पार्क, जहाँ यस निर्माणका अवशेषहरू फेला पारिन्छन् र तपाईंसँग एउटा दृष्टिकोण छ जुन डुईरो नदी खोलाको शानदार दृश्य प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईंले सोरियामा गर्नुपर्ने अर्को कुरा प्लाजा मेयरको भ्रमण गर्नु हो। यो को एक छेउमा अवस्थित छ कोलाडो सडक, जहाँ तपाईं असंख्य पसल र बारहरू पाउनुहुनेछ। वर्ग आफैमा रत्न हो, तर यसले केही भव्य भवनहरू पनि राख्छ। उदाहरण को लागी, साझा घर, १ XNUMX औं शताब्दीमा सुधार गरियो र जुन अहिले ऐतिहासिक अभिलेखको मुख्यालय हो, वा दर्शकहरूको महल र बाह्र वंशहरु। अन्त्यमा, तपाई वर्गाकारमा पाउनुहुनेछ डोआ उर्राका टावर, १ the औं शताब्दीबाट; को सिंहहरूको फोहरा, १ XNUMX औं शताब्दीबाट, र सान्ता मारिया ला मेयरको चर्च, एक सुन्दर प्लेटेरक्वे वेदीपीसको साथ।
गमाराको गणनाको दरबार
यो सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्माण हो नागरिक पुनर्जागरण शैली क्यास्टिलियन शहरमा। बाह्य रूपमा यो दुई शरीर मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा कम्प्याक्ट र ठूलो बाल्कनीसँग छ, जबकि अर्कोमा विस्तृत, टस्कन स्तम्भहरूमा बाह्र र चौबीस अर्धवृत्ताकार मेहराबहरूको डबल मेहराब छ। भित्री सम्बन्धमा, यसको भव्य चित्रण आँगन दुई-कथा
नदीहरू र साल्सेडोको दरबार
यो उही परिवारको हो जुन अघिल्लो बनाइएको थियो। तर यो १ somewhat औं शताब्दीको सुरूदेखि केही हदसम्म पुरानो हो। उसको हाइलाइटहरू पुनर्जागरण ढोका प्लेटरेस्क तत्वहरु संग सजाइएको। यो प्लाजा डे सान क्लेमेन्टेमा अवस्थित छ, जहाँ त्यहाँ पनि छ हाकिम को घर, यसको तीन राम्ररी जाली बालकनीहरु संग।
तपाईंले सोरियामा गर्नुपर्ने चीजहरू मध्ये, यस संग्रहालयको भ्रमण आवश्यक छ। हामीले भनिरहेका थियौं, शहरको बाहिरी भागमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो न्युन्कोशिया, जुन इतिहासमा क्रूर घेराबन्दीको लागि तल झरेको छ जुन यो सहि र वीरतापूर्वक सहियो।
वास्तवमा, यो एक हो पुरातात्विक संग्रहालय कि को वस्तुहरु को मालिक छ पालेओलिथिक तथाकथित रूपमा solutrean टुक्रा र नियोलिथिक। तर तार्किक रूपमा यसले पुरानो नुमन्टियामा फेला परेका सबै चीजहरू राख्दछ। ती मध्ये, ती पनि समावेश थिए नुमेन्टाइन सेल्टीबेरियन सिरेमिक्स: चश्मा, प्लेटहरू, जगहरू वा ट्रंकहरू जुन वीर पूर्व रोमी शहरका बासिन्दाहरूका हुन्।
अर्को तर्फ, तपाईंले सोरिया टोरियामा पनि हेर्नु पर्छ सैन जुआन डी डुएरोको मध्यकालीन संग्रहालय, रोमान्स्क्यू आर्किटेक्चरको सेट जुन मठबाट सम्बन्धित थियो यरूशलेमको सेन्ट जोनको अस्पतालरहरूको आदेश र जुन अहिले भग्नावशेषमा छ। यद्यपि यसको भ्रमण यसको भव्यताको लागि साँच्चिकै प्रभावशाली छ।
सोरियामा गर्नका लागि अन्य चीजहरू
स्मारकहरू हेर्नको अतिरिक्त, सोरियामा तपाईं अन्य थुप्रै चीज गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, कल अनुसरण गर्नुहोस् माचडियन मार्ग, जुन महान कविसँग सम्बन्धित बिभिन्न ठाउँहरू हुँदै जान्छ। तपाईंलाई थाहा छ, उहाँ सोरियामा बस्नुहुन्थ्यो जहाँ उहाँ विवाह गर्नुभयो Leonor Left, जो केहि बर्ष पछि मर्नेछ। यो मार्ग ले तपाईंलाई लैजान्छ सान्ता मारिया ला मेयरको चर्च, जहाँ तिनीहरूले विवाह गरे; लाई एस्पिनो गिर्जाघर, कहाँ छ सुकेको एल्म जुन उनले आफ्नो कविता मध्ये एक मा अमर गरे, वा मा संस्थान जहाँ उसले फ्रान्सेली भाषा सिकाउँथ्यो र अझै कक्षाकोठा थियो जस्तो यो छ
तपाईं सोरियामा भव्य बार र रेस्टुरेन्टहरूको पनि मजा लिन सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं ताप्सा खान सक्नुहुन्छ र खान सक्नुहुन्छ। तिनीहरू मुख्यतया माथि उल्लिखित मा पाइन्छन् सान क्लेमेन्टे स्क्वायर, लोकप्रिय रूपमा परिचित "ट्यूब", र यो क्षेत्र हो जहाँ सोरियन्स भेला हुन्छन् यसको उत्तम खानाको आनन्द लिन।
सोरियामा के खानुहुन्छ
माथिको, हामीलाई सोरियाको ग्यास्ट्रोनोमीको बारेमा कुरा गर्न हामीलाई नेतृत्व दिन्छ। उस्तै सुविधित उत्पादनहरू हुन् कालो ट्रफल, the sausages जस्तै मीठो रगत सॉसेज, the cordero र चीज.
शहर को विशिष्ट पकवान को रूप मा, तपाईं ठीक कोशिस गर्नु पर्छ भेडाको पाठो, जो यस जनावरको ताजा रगत अनुभवी छ र ग्रिलमा तयार छ। तर यदि हामी ब्रेज्ड डिसेसको बारेमा कुरा गर्छौं भने यस प्रान्तमा छ torreznos वारेन्टी मार्कको साथ। तिनीहरू सोरियामा पनि सामान्य व्यंजनहरू हुन् बाउल बॉयलर मा स्टिभ, the कोडको लसुन muleteer, लास धूम्रपान ट्राउट, लास अचारको कण र crumbs। पछिल्लो स्पेनका अन्य धेरै क्षेत्रहरूसँग साझेदारी गरिएको एउटा डिश हो सलामान्का, एक्स्ट्रेमादुरा वा मर्सिया।
अधिक विशिष्ट अझै छ paturrillo, सुँगुरको trotters र tripe को एक स्ट्यू। र कन्फेसनरीको रूपमा, हामी तपाईंलाई प्रयास गर्न सल्लाह दिन्छौं अंकुरहरू र अल्माजनको धैर्यता, the मानटेकाडोस y sobadillos, साथै क्रस्ट गरिएको पाई, तिनीहरूका बीच क्रीम र क्रीमको साथ पुफ पेस्ट्रीका धेरै तहहरू मिलेर बनेको छ।
निष्कर्षमा, यी सोरियामा केहि चीजहरू हुन्। यदि तपाईंले शहर भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईं रमाईलो गर्नुहुनेछ शानदार कलात्मक सम्पदा, को विचार सुन्दर कास्टिलियन परिदृश्य र एक स्वादिष्ट ग्यास्ट्रोनोमी। के तपाई उसलाई भेट्न चाहानु हुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » सोरियामा के गर्ने